भोलि वर्षकै पहिलो शुक्रबार ! तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
भोलि मिति बिक्रम संवत २०७६ साल बैशाख महिनाको ६ गते शुक्रवार तदनुसार सन् २०१९ अप्रिल १९ तारिख तपाईको दिन कस्तो रहला ,हेर्नुहोस तपाईको भोलिको राशिफल
कुनै कार्य थालनी गर्नुपुर्व सोच विचार गरेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या औउन सक्ने छ। समग्रमा तुला राशी भएकाहरुका लागि भोलिको दिन सामान्य बित्ने छ।
नया कार्यको थालनी सकेसम्म भोलिको दिन नगर्दामा राम्रो हुनेछ। अनावश्यक मनमुटावमा नफस्नु होला। मध्यान्ह पश्चातको समयमा भने स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। भाई बहिनीको सम्बन्धमा सुमधुरता बढ्ने छ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ।
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६१४:३९